Motivation for success :: ब्ल्याक राइस भान्सा: जहाँ पाइन्छ अचम्मका परिकारहरु (भिडियो सहित )
ब्ल्याक राइस भान्सा: जहाँ पाइन्छ अचम्मका परिकारहरु (भिडियो सहित )
मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : बिहिबार, चैत्र १२ २०७७
पछिल्लो समय नेपालमा होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। त्यसो त त्यही अनुपातमा फुड कल्चरको बिकास पनि भइरहेको छ। नेपाली खाना पारखीहरु कुनै अवसर पारेर मात्रै बाहिर खाना खान जादैनन, हिजोआज कम्तीमा हप्ताको एकचोटी भएपनी बाहिर खान जाने संस्कृती बढ्दो छ। यसरी निरन्तर बढीरहेको फुड मार्केटमा नयाँ नयाँ प्रबिधि भित्राउदै ब्यवसायिक सम्भावना खोज्नेहरु पनि थुप्रै छन् । कोहि फरक काम गर्छन् भने कोहि परम्परागत कामलाइ नै फरक तरिकाले गर्छन् । आज हामिले यहाँ प्रस्तुत गर्ने सफलताको कथा त्यही फरक काम गर्दै फुड इन्डस्टृमै नौलो पहिचान बनाउन सफल एउटा ब्यवसायको कथा हो।
काठमाडौंको बुद्धनगरमा केही समय अघिदेखि संचालनमा आएको ब्ल्याक राइस भान्छा त्यही नयाँ प्रकृतिको काम हो। सामान्यतया नेपाली समाजले कालो बस्तुलाइ असुभ मान्ने भएपनी रुकुमका केशव रावलले भने त्यसैमा ठुलो ब्यवसायिक सम्भावना देखेका छन् । कुनै समय औषधीय गुणले भरिपुर्ण कालो चामलको खाना खाएका उनले त्यसको उत्पादन भएपनी नेपालमा प्रचुर उपभोग नभएको थाहा पाएपछि उत्पादन लाई बजारसंग जोड्नका लागि यो ब्यवसाय सुरु गरेका छन् ।
यहाँ कालो चामलको खानामात्रै होइन ब्ल्याक चिकेन अर्थात् कालो कुखुराको मासु पनि पाइन्छ । हाइ प्रोटिन हुने हुँदा ब्ल्याक राइस मात्रै खान नमिल्ने अनि ब्ल्याक चिकेनको स्वाद नेपाली उपभोक्तालाई चखाउनका लागि उनले यो कालो खानाको सेट तयार पारेका छन् ।
मिडिया, ट्राभल एजेन्सी अनि यातायात कम्पनी सम्म संचालन गरिसकेका उनको यो काम भने नौलो प्रयोग हो। ट्राभल एजेन्सि मार्फत पर्यटक घुमाउन लाने क्रममा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा देखेको समस्या समाधान गर्न र गाउँका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न उनले यो रेस्टुरेन्ट खोलेका हुन् ।
उनले रेस्टुरेन्टमा प्रयोग गर्ने अधिकाँस सामान हिमाली अनि पहाडी जिल्ला बाट आउँछन् । यी सामानहरुमा औषधिय गुण हुनुका साथै मानव स्वास्थ्यका लागि अतिउपयोगी हुन्छन् ।
कुनै पनि देशको बिकास हुनका लागि उत्पादन वढ्नुपर्ने र ती उत्पादनको समुचित बाजारिकरण हुनुपर्ने धारणा राख्ने केशव आफुले सम्भव भएसम्मका सबै सामान गाउँ बाट ल्याउने र अर्गानिक स्वाद दिने प्रयास गर्ने गरेको बताउँछन् ।
उनको रेस्टुरेन्टमा लसुन, प्याज टमाटर लगायतका सामानहरुको प्रयोग सकेसम्म हुँदैन। यी सामानहरुको प्रयोग गर्दा वास्तविक स्वाद हराउने उनको भनाइ छ।
उनि कालो चामल र कुखुराको बजार सम्भावना अपार रहेको भन्दै यसले नेपाली कृषकहरुलाइ समृद्ध बनाउने धारणा राख्छन् । तुलनात्मक रुपमा उपभोक्तालाइ थोरै महँगो पर्ने भएपनी नयाँ खाना भएको हुँदा त्यो अनुपयुक्त नहुने उनी बताउँछन् ।
थकाली जस्तै उनी ब्ल्याक राइसलाई एउटा ब्राण्ड बनाउने तयारीमा छन् । सिलाजित चियार कफि पनि पाइने यो रेस्टुरेन्टको यार्सा आलु नामक आइटम अर्को नौलो परिकार हो। यार्सागुम्बा फल्ने ठाउँतिर पाइने यो आलुको आफ्नै विशेषता छ।
देशका विभिन्न भागबाट ल्याइएका घरपालुवा पशुपन्क्षीको मासुका साथै यार्सा चिया पनि ब्ल्याक राइस भान्साघरको विशेष आकर्षण हो। त्यसबाहेक थरिथरिका फलफुल र मसलाको मिश्रणबाट बन्ने फ्रुट टि त्यतिकै स्वादिस्ट र फलदायी छ।
फरक स्वाद दिनकै लागि उनले सिस्नोको सुप देखि घट्टमा पिसेको पिठो अनि लोपोन्मुख चिनो देखि कागुको सम्म काठमाडौंका ग्राहकका लागि ल्याएका छन् ।
ब्ल्याक राइसनै खानुपर्ने कारण के हो त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनी केही अनुसन्धानात्मक लेखहरुको रिफ्रेन्स लिदै आफ्नो धारणा राख्छन् ।
नेपाली बजारमा ब्ल्याक राइस के हो र यसको महत्व किन छ भन्ने धेरै नबुझिएकाले यसलाइ मार्सीसंग जोडेर लिने गरिएको छ। यसको महत्व बुझेका र एकचोटि चाखेकाहरु भने बारम्बार फर्केर आउने गरेकाले यसको बजार निकै ठूलो हुने उनको भनाइ छ।
रेस्टुरेन्टको भिताहरुमा ग्राहकहरुका लागि विभिन्न किसिमका चित्रकलाहरु राखिएको छ। ग्रामीण जिबन शैली झल्काउने यी चित्रहरुले मानव जिबनका विभिन्न परिस्थितिलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
आज हामिले ब्यवसायिक रुपमा सफल देखिरहेको केशवको संघर्सको गाथा उतिकै रोचक छ। दोश्रो ब्यवसायका रुपमा काम गरेको रुकुम यातायात प्रालिले भने उनको जिबनमा ठूलो कठिनाइको सामना गरायो। बिबिध चुनौतीका बापजुद यो कम्पनी सफल बनाएका उनी यातायातमा रहेको सिन्डिकेटको पीडित हुँदै त्यसको अन्त्यका लागि ठुलो क्षती ब्यहोरेर लडेका ब्यक्ति हुन् । कानुनत: यातायातमा सिन्डिकेट हटेपनी आजपनी यो काम ब्यवहारिक रुपमा सहज नभएको उनको भनाइ छ।
लक्डाउन अघि ४२ जनालाई रोजगारी दिन सफल उनी आजपनी २५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका छन् । त्यस्तै तलव दिने कुरामा पनि उनी अरु रेस्टुरेन्टहरु भन्दा फरक छन् ।
हालसम्म ठूलो आम्दानी ब्ल्याक राइस रेस्टुरेन्टबाट गर्न नसकेको भएपनी उनी नौलो प्रयोग गर्न सकिएको छ भन्नेमा सन्तुष्ट छन् । अहिले उनले जसो तसो रेस्टुरेन्टको संचालन खर्च मात्रै धानिरहेका छन् भने उनको उदेश्य पनि धेरै कमाउनु भन्दा ब्ल्याक राइसको ब्राण्ड बनाउनेतिरै केन्द्रित छ।
नयाँ कन्सेप्ट लिएर होटल ब्यवसाय गर्दा विभिन्न अवसर र चुनौतीहरु आउँछन् । ब्ल्याक राइस रेस्टुरेन्ट जस्तो ब्यवसायको अवसर र चुनौतीलाई उनी यसरी उल्लेख गर्छन् ।
नेपाल सरकारले विभिन्न क्रियाकलाप संचालन गर्नका लागि ब्यवसायिलाइ सहयोग गर्नुपर्ने केशवको भनाइ छ। अनुदानको रुपमा पैसा दिने भन्दा पनि सहज रुपमा ऋणकै ब्यवस्था गरिदिए पनि ब्यवसाय संचालन गर्न ठूलो मदत पुग्ने उनको भनाइ छ।
आम नेपाली युवाहरूमा काम गरेर खानुपर्छ भन्ने सोच बन्नुपर्ने र केही सीप सिक्नुपर्ने उनको धारणा छ। सीप सिक्न नचाहने तर अवसर भएन भन्ने प्रबृत्तिले हामिहरु पछि परेको भन्दै उनी युवाहरूलाई यस्तो सुझाव दिन्छन् ।
ब्ल्याक राइस रेस्टुरेन्टमा रिपोर्टिङको क्रममा हामिले त्यहाँको विशेष ब्ल्याक राइस डिस को टेस्ट गरेका छौँ । तपाईं पनि हाम्रो यो अनुभव भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ ।
हामिले जस्तै यो नयाँ डिस तपाईंपनि चाख्न चाहनुहुन्छ भने एकचोटि ब्ल्याक राइस भान्सा पुग्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईंले खाने खानाको अनुभव पक्कै नौलो र आनन्ददायी हुनेछ।
नयाँ सोच र ब्यवसाय भित्राउदै देशमै अवसर सिर्जना गर्न सफल केशव रावल र ब्ल्याक राइस भान्छालाई आगामी यात्राको लागि मोटिभेटन्युजको धेरै धेरै शुभकामना ।
Sub-Editor at Motivate News
यसरी गर्न सकिन्छ कार्य–क्षमताको विकास
सुत्नुअगाडि पढ्नुहोस्, दिमाखमा चमत्कारिक परिवर्तन आउने छ
असफलतासँग तपाईंको कुनै सम्बन्ध छैन, धैर्य राख्नुस्
ग्यारेज चलाउने विजय एक दिनमै कमाउँछन् झण्डै ५० हजार, यस्तो छ उनको सफलताको कथा
यी हुन् दुई करोड ५५ लाखको पुरस्कार पाउने नेपाली युवा
कृषि अनुदान पाउने फर्म झोलामा, वास्तविक किसानको उत्पादन खोलामा …
भवानी खापुङको जीवन संघर्ष, खेतबारीको हलिदेखि राज्यमन्त्रीसम्म
यिनै हुन् ७७ जनाको ज्यान बचाउने साहासी पाइलट
खड्काले पाइन सानो उमेरमै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा, पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने संकेत
यति राम्री १९ वर्षीया युवती बनिन् कांग्रेसको वडा सभापति
एक दृष्टिविहीन युवाको सफलताको कथा : १० हजार लगानी गरेर सेयर बजारमा प्रवेश, करोडमाथिको पोर्टफोलियो
एमाले महाधिवेशनमा मध्येराती जे देखियो…
सुवास नेम्वाङले सोधेकाे एउटा प्रश्नले ओलीको ओठतालु सुक्याे
भीम रावलमाथि सुरक्षा खतरा बढ्याे, प्रहरीले लियाे एक्सन
यी हुने केपी ओलीले प्रस्ताव गर्ने एमालेका १९ पदाधिकारी, बाहिरियो लिष्ट
दुई प्रहरी अधिकृतले जोसमा होस् गुमाउँदा गृह मन्त्रालयले लियो एक्सन
गगन थापाबारे आयो अत्यन्तै दुःखद खबर, नेता कार्यकर्ता निराश
थाल्याण्डमा रहेका बर्षमानले सुन्नपर्यो अत्यान्तै दुःखद खबर, ओनसरीलाई तनाव
ग्लोबल आईएमई बैङ्कको भित्री कुरा थाहा पाएपछि भकाभक शेयर बेच्दै लगानीकर्ता
तपाईँको सेन्चुरी बैङ्कमा खाता छ ? जेल जानुहोला नी !
माधव नेपालले अस्पतालमै सुन्नपर्यो अत्यान्तै दुखद खवर, बलियो खम्बा ढल्यो
Tweets by motivatenews
© 2017 copyright and all right reserved to Motivatenews | Site by : SobizTrend